Ahoana ny fiofanana Labrador | Tontolo alika
Ahoana ny fampiofanana Labrador
Monica Sanchez | | Training, Taranaky ny alika
Ny Labrador dia alika tena tia fiaraha-monina, izay mifanerasera tsara amin'ny biby sy ny olona hafa. Fa, toy ny alika rehetra, mila ampianarinaSatria alika kely io, dia misy lalàna mifehy ny fiaraha-miaina mba hisorohana ny olana amin'ny ho avy.
Noho izany, raha vao nividy iray ianao, aorian'ny famakiana ity lahatsoratra ity dia ho fantatrao ny fomba fampiofanana labrador.
1 Tsy maintsy manomboka amin'ny andro voalohany ny fiofanana
2 Mametraha fetra ... ary aza ovaina!
Tsy maintsy manomboka amin'ny andro voalohany ny fiofanana
Na dia alika kely aza izy dia manao zavatra tiantsika ary afaka mahita fahafinaretana mihitsy aza isika, toy ny fiakarana eo ambonintsika, nibbling amin'ny zavatra sasantsasany na koa mimenomenona indraindray, tsy maintsy mandray ny andraikitry ny mpanabe isika apetraho ao an-trano fotsiny izany. Fa eny, ho an'ireo mpampianatra manaja ny biby amin'ny fotoana rehetra.
Raha ny marina, tsy mety ny manery anao hanao zavatra, satria amin'ity fomba ity no hany zavatra ho tratrarina dia ny fahatahorany antsika. Ary amin'ny tahotra tsy misy afaka mianatra. Mila hentitra amin'ny fanapahan-kevitsika isika, fa tsy tokony hitokona na hiantso biby mihitsy. Ho fanampin'izay, ny Labrador dia alika vonona ny hianatra foana, noho izany ny fampianarana azy hanao tena fitondran-tena dia mora kokoa noho ny eritreretintsika voalohany.
Mametraha fetra ... ary aza ovaina!
Tahaka ny nametrahan'ny ray aman-drenintsika fetra antsika fony mbola kely isika mba hilamin-tsaina ao an-trano ary tsy hanana olana amin'ny ho avy, amin'ny alikantsika dia tsy maintsy manao zavatra mitovy tanteraka isika. Ohatra, raha tsy tiantsika hipetraka amin'ny sofa izy dia tsy avelantsika hanao azy io na dia indray mandeha aza, satria raha vitany na dia indray mandeha aza, dia ho sarotra ny hampahafantatra azy fa tsy vitany intsony izany.
Ny fianakaviana iray manontolo dia tsy maintsy miara-miasa amin'ny fampiofanana azy ary tokony hampianarin'ny tsirairay azy izanyNy tsy fanatanterahana izany dia hiteraka fikorontanana ho an'ilay biby ary hiafara amin'ny fanaovana izay tiany atao izy io.
Raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny labrador ianao, eto manana lahatsoratra momba ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fampiofanana Labrador
Ahoana ny fampiasana fanabeazana tsara amin'ny alika
Fa maninona alika alika roa na mihoatra